Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop Qaybta 4 | Abuurista khadka tooska ah
Geedi socodka mudada leh Adobe Photoshop Waa wax aad u raaxo iyo madadaalo leh markaad la shaqeysid, oo leh khibrad kuu saareysa inaad adeegsato tuubbooyinka kumbuyuutarka ama ficillada barnaamijyada, si aad ugu raaxaysato uga shaqaysid nidaam shaqo oo firfircoon. Markaad dhamaysato taxanahan casharrada ah ee ku saabsan qaadashada iyo midabaynta Adobe Photoshop, Waxaan horumarin doonaa taxane kale oo sharraxaya aaladda shaqada ee ugu macquulsan si ay ula shaqeeyaan dusha iyo midabaynta sawirro kala duwan.
Maanta waxaan baran doonaa astaamo kale oo badan oo ka mid ah isku dhafka xoogga leh ee qalabku dejiyo Burush iyo Qalin, barashada, tusaale ahaan, in la buuxiyo tirooyinka xiran ama toobiyeyaasha gaaban ee naga caawin doona inaan si raaxo leh ugu shaqeyno. Waxaan sidoo kale bilaabi doonnaa inaan u diyaarinno sawirka midabaynta dambe adoo adeegsanaya xulashada kanaalka. Ha moogaan Adigaan kula tegayaa tutorial Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (Qaybta 4aad).
1 Dhammaystirista mudnaanta
2 Ku celcelinta tuubbooyinka kumbuyuutarka
3 U diyaar garowga midabaynta
Sidaan horeyba ugu aragnay Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 3aad), isku darid Burushka iyo Qalinka, waxaan ku guuleysan karnaa xakameyn weyn sida iyo meesha aan qalinka u dhigeyno, annagoo haysanno buraashyo kala duwan hadba sida aan ugu baahanahay Si loo buuxiyo qaab ku jira sawirkeena, waa inaan isticmaalnaa qalinka, iyo khadadka iyo gacan qabashada, dulmar tirada aan rabno inaanu buuxino iyo marka la xiro (tilmaame qaab qaab Calool wuxuu noo soo sheegi doonaa iyadoo la adeegsanayo goobo ka soo muuqan doonta dhinaceeda) midigna guji halka ay ku taal baafinta ama tirada. Halkan sanduuqa wadahadalka xulashooyinka qalabka ayaa soo muuqan doona Calool, kuwaas oo aan ka heli doonno Buuxi Jidka.
Markaad sidan samaynayso, sanduuqa wada hadalka ayaa soo muuqan doona oo aad ugu eg kan qalabka Buuxi (Tafatir-Buuxi ama Shift. + F5), halkaasoo aan ka kala dooran karno xulashooyin dhowr ah oo aan kugula talin karo inaad si xor ah u sahamiso. Waxaan had iyo jeer kugula taliyaa markaan hadlayo waxaan sharxayaa waxyaabaha gudaha iyo dibedba ee aan ku sameyno dhammaan noocyada imtixaannada kahor intaanan bilaabin inay si toos ah uga shaqeeyaan mashruuc. Waa wax wanaagsan in la arko guulo iyo khaladaad ina siin doona aqoon siinta aaladda noo oggolaaneysa inaan hadhow ku darno abuurista mashaariicdeena. Laga soo bilaabo sanduuqa wadahadalka waxaan ka buuxineynaa shaxanka muuqaalka leh madow leh qalabka Calool de Adobe Photoshop ka dibna waxaan fureynaa fure Intro si looga dhigo dariiqa loo abuuray inuu lumo. Markasta oo aan dhamayno waddo waa inaan baabi'inaa wadadii hore ee aan soo marnay. Si tan loo sameeyo, kaliya riix fure Intro.
Ku celcelinta tuubbooyinka kumbuyuutarka
Markaan ogaanno sida loo maareeyo hawsha qalliinka ee ku tiirsanaanta menusyada qalabka ee lagu soo bandhigo adigoo gujinaya midig u dhigma mid kasta (gabi ahaanba ka duwan) qalabka daabacaadda. Adobe Photoshop waxa aan isticmaaleyno, Burushka iyo Qalinka. Marka aan helno cabirka ficilka khad, dhagsii saxda ah, dariiqa saxda ah, dhajinta saxda ah, tirtirka wadada, waxaan bilaabi karnaa adeegsiga toobiyeyaasha ama kumbuyuutarrada gaaban ee aan haysanno oo aan u hayno inaan kula shaqeyno barnaamijka. Jidadkaani toosa ayaa naga caawin doona inaan si habsami leh u socodsiino mashaariicdeena qaab wax ku ool ah oo macquul ah. Hawsha shaqo ee u dhexeysa tuurista labadan qalab waxay noqon doontaa sidan soo socota.
Waxaan sameyneynaa dariiqa aan dooneyno inaan ku sawirno shax leh aaladda Calool. Si aad u xulato qalabka Calool adoo adeegsanaya furaha toobiye, riix P.
Markaan helno dariiqa loo maro khad, waxaan doorannaa qalabka Caday adoo adeegsanaya mid ka mid ah kumbuyuutarrada loojaro oo lagu daro Adobe Photoshop barnaamijkaaga oo riix fure B. Marka aan ku dhex jirno qalabka, waxaan doorannaa buraashka aan dooneyno adigoo gujinaya midig, taasna waxay noqon doontaa midda aan la shaqeyno. Waxaan dul saarnaa calaamadda buraashka si aan u dooranno oo aan u riixno fureha Intro markii ugu horreysay ee laga baxo sanduuqa wadahadalka xulashooyinka qalabka leh burushka la xushay, guji mar labaad burushka si uu u buuxiyo wadada, iyo mar saddexaad si aad u muujiso buuxinta.
Tirtir dariiqa horey loogu qoray
Ka dib markaan dhammeyno mudista sida aan u jecleynay, waxaan haynaa, sidaan horayba u idhi, inaan ka dhigno dariiqii hore si aan u sii wadno sawir qaadista iyo u mudista sawirkeenna iyada oo aan dhibaato jirin. Tan awgeed, waxba kama fududaan marka la riixo toobiye kumbuyuutarka si loo doorto qalabka qalinka (P) oo riix Intro waana la waayi doonaa.
Jidkan marka la dhammeeyo, waa inaan mar kale raad raacnaa oo aan sii wadnaa gelitaanka sawirka ilaa aan dhammeyno.
U diyaar garowga midabaynta
Iyada oo marinka loo dhammeeyo, waxaan bilaabaynaa inaan diyaarinno midabaynta sawirkeenna. Waxaan ku abuureynaa kooxda dhexdeeda Weydiiyay, lakab asal ah oo ka hooseeya lakabka ay ku jirto sawirka qalin. Kadibna waxaan damin doonnaa muuqaalka lakabka ay kujiraan sawirka qalin isagoo riixaya isha ku jirta thumbnail ee Lakabka Palette. Sidan ayaan ku arki doonnaa natiijada ugu dambeysa ee aan qaadaneyno oo waan sixi karnaa ama dareemi karnaa qanac, sida hal-abuurnimadeennu ay noo sheegayso Marka aan dhammeyno waxaan ka tagi doonnaa kaliya muuqashada lakabyada ay ku jiraan asalka cad ee kooxda Weydiiyay iyo lakabka ay kujirto laf-dhabarka laftiisa. Waxaan u jeesaneynaa xulashada palette ee Lakabka Palette oo halkaas marka aan doorano ikhtiyaarka Isku dar muuqda.
Kadibna aaladda Sixir wand Waxaan dooran doonnaa meel kasta oo ka mid ah aagga caddaanka ah ee sawirka oo aaggaas oo dhan waa la dooran doonaa iyada oo aan wax sawir ah oo tilmaamaynin sawirkeenna laftiisa. Waxaan riixnaa furayaasha Wareeji + Ctrl + I si aan u helno toobiye kiiboodhka oo noo geeya ikhtiyaarka Maalgelinta Xulashada, si loo rogo xulashada iyo taas bedelkeeda aagga ku hareeraysan, waa sawirkayaga oo la xulay. Adiga oo riixaya toobiye kiiboodhka Ctrl + J, waxaan marin doonaa toobiye kiiboodhka ee ikhtiyaarka lahaa Lakabka Via Nuqul, oo waxaan ku lahaan doonnaa sawirkeena midab cad oo gudaha ah una diyaarsan midab. Qeybta xigta ee tan tutorial Waxaan ku bilaabi doonaa midabaynta xulashada kanaalka. Ha moogaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 4aad)